Barcelona oo $ 200m dul dhigtay Xidiga Lionel Messi – Xidigaha
Barcelona oo $ 200m dul dhigtay Xidiga Lionel Messi
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay iska iibiso Lionel Messi xagaagan hadii ay hesho dalab 200 milyan ginni ah.
Kadib toddobaadyo la isla dhexmarayay, ayaa shaaca laga qaaday fiidnimadii Talaadada in weeraryahanka muddada dheer Messi uu si rasmi ah u codsaday inuu ka tago Camp Nou inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Si kastaba ha ahaatee, 33 jirkan ayaa doonayo inuu si xor ah ugu baxo heshiis qandaraaskiisa ah, ka bixitaankaas ayaa dhacaya 10ka Juun, taasoo ka dhigeysa Barcelona inay ku sii xoojiso miiska wadahadalada.
Si kastaba ha noqotee, waxay dooneysaa inay ka fogaato inay ku lumiso halyeeyga kooxda AS ayaa sheeganeysa in kooxda reer Catalan inay diyaar u tahay inay 200 milyan ginni ku aqbasho xiddiga heerka caalami ee dalka Argentina.
In kasta oo Messi uu haatan ku sii dhow yahay ka tagista kooxda, qiimayntaas ayay u badan inay soo jiidan doonto xiisahiisa kooxo badan oo Yurub ah oo ay ka mid yihiin Manchester City iyo Paris Saint-Germain .
Inter Milan iyo Manchester United ayaa sidoo kale ku biiray tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka.
Be the first to comment on "Barcelona oo $ 200m dul dhigtay Xidiga Lionel Messi"